Tourism inaTime of Uncertainty | Myanmar Business Today
Home Featured Tourism inaTime of Uncertainty
Tourism inaTime of Uncertainty
U Thet Lwin Toh, Patron and former president of Myanmar Tourism Association.
For six years, the government of Myanmar has madeaconcerted effort to promote tourism. It has worked to establish community-based tourism and adopted policies to encourage inbound tourism.
The emergence of travel bloggers following increased internet penetration has stimulated travel interest among local people and contributed to domestic tourism development. The relaxation of visa rules for tourists from various parts of the world has also been effective in raising visitor numbers.
The Ministry of Hotels and Tourism’s official website now publishes articles, information and content on travel destinations in different languages. This, too, constitutesaserious tourism promotion effort.
The Tourism Master Plan projects over7million tourist arrivals this year. That target isabit far-fetched, however, considering the current state of the tourism industry.
Myanmar received more than 3.5 million tourists in 2018 and more than 4.3 million in 2019,a23 percent year-on-year increase. But only about 1.4 million of the total number in 2018 and about 1.9 million of 2019 visitors can be considered tourists, as they entered the country onavisa while the rest only briefly crossed the border. Moreover, nearly 750,000 out of 1.9 million visa-holding tourists are Chinese. Their numbers are bound to fall due to the novel coronavirus that broke out in Wuhan in December and became an epidemic during the Chinese Lunar New Year holiday, causing travel disruptions that are projected to haveasevere and lasting impact on the region’s tourism. Myanmar, where Chinese tourists account foralarge share of inbound tourism, is now facing uncertain times.
Myanmar Business Today sat down with U Thet Lwin Toh, Patron and former president of Myanmar Tourism Association, to talk about the challenges facing Myanmar’s tourism sector and the potential it possesses. Also the founder of Myanmar Voyages International Tourism Company, he hadalot of insight to share from nearly two-and-a-half decades in the industry.
We discussed the Tourism Master Plan 2013-2020, which serves asabackbone of the country’s tourism development.
“When implementing the action plan based on the master plan, we need funding, technology and participation from industry stakeholders, private sector and local communities,” U Thet Lwin Toh said. “Now our affiliated organizations are working onafive-year or 10-year plan.”
The master plan is focused on promoting tourism in regions and states including Rakhine. In accordance with the master plan, the Tourism Development Law was passed in September 2018 to regulate the industry and prevent unwanted consequences. More thanayear has since elapsed but the bylaw has yet to be passed. It is expected to be approved during this current term of Parliament.
“Normally, the bylaw has to come out in 90 days after the law is passed. If not, the relevant ministry has to issueastatement explaining the situation. At the moment, the industry is regulated by rules and regulations, not by law,” said the industry veteran.
Even with no tourism bylaw in place, the government began easing visa requirements for tourists from China, South Korea, Hong Kong, Macao, Japan andanumber of European countries.
“The results of easing visa requirements for Korea, Macao, Hong Kong and Japan were gradually visible around three months after the decision. They are more visible afterayear,” he said.
Tourism organizations want the government to consideralonger-term program, as the current visa easing is inatrial run for six to 12 months. However, the government recently decided to temporarily suspend granting visas on arrival to limit the spread of the novel coronavirus. Regulators have also ordered tour companies, hotels and tourism organizations not to sell package tours to inbound Chinese travelers or local tourists bound for China.
U Thet Lwin Toh believes that the country should ease visa requirements for Western tourists, who not only spend more but also tend to respect the environment and local culture.
“Travelers from Western countries are value tourists; they spend more and stay longer. Moreover, they are environmentally friendly travelers,” he said.
Tourism data from 2019 show that the number of inbound tourists from Spain has increased by 20 percent, from Italy 17 percent, and from Germany2percent, while the number of travelers from France and UK have remained flat.
Last year local tour companies, eager to shore up falling tourist numbers, introduced zero-budget tourism – which was popular in neighboring countriesadecade ago. In some areas, the arrival of zero-budget tourists have led to challenges and conflicts with local people.
“On package tours, there’saguide who encourages travelers to follow rules and pay tax while zero-budge tour is under no control,” U Thet Lwin Toh pointed out.
The Ministry of Hotels and Tourism has yet to take action on this, although it knows the problems. There are bilateral ties to consider, not to mentionafear of tourist number decline.
In addition to traditional tour packages, other forms of tourism including community-based tourism, ecotourism and adventure tourism should be implemented once the peace process has made big progress in conflict-torn areas, suggested the industry veteran. But he also advised treading carefully when creating new forms of tourism.
“We need to be cautious. When we say adventure tourism and elephant rides and animal circuses, Asia travelers might like it, but some educated westerners, animal rights activists and others might not like it.”
Local tour companies recently introduced incentive tourism featuring different programs for group tours inabid to attract more inbound tourists.
“This type of tour gives amazing experience to travelers, surprising them and using huge resources. This is called incentive tourism. It requires resources and generatesabig profit,” U Thet Lwin Toh said.
The Singapore Tourism Board, for example, is promoting and introducing such tours overseas.
In order to improve tourism, it is important to haveagood management system enabling safe travel. Myanmar is seeingagradually increasing number of tourists, but in order to maintain sustainable tourism growth, it needs to offer services that satisfy visitors.
The Ministry of Hotels and Tourism last month started implementing an information providing system at Yangon and Mandalay international airports and in Bagan. By scanning QR codes, travelers can access information about particular locations and sites.
“Times have changed. Handing over handouts and displaying signboards are no longer working,” said U Thet Lwin Toh. “Today is the mobile era. Information, videos and images can be accessed throughasmartphone. We need to follow the trend.”
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ၂၄ နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင် ဦးသက်လွင်တိုး နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအားပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်နှစ်လောက်ကစပြီး အာရုံစိုက်လာပါတယ်။ လူမှှုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖော်ဆောင်လာတာ၊ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုကို အားပေးရာရောက်တဲ့ ဗျူဟာတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ လုပ်လာပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှှုများလာတာနဲ့အတူ လူမှှုကွန်ရက်မှာ ခရီးသွားဘလော်ဂါတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမျှဝေတာတွေကလည်း မြန်မာပြည်ကိုခရီးသွား ပိုစိတ်ဝင်စားလာစေပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ခရီးသွားရတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာသလို နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအပေါ်အစိုးရရဲ့ ဖြေလျှော့မှှုတွေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပေးမှှုကလည်းအားကောင်းလာတာက ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အခြားသော လုပ်ငန်းတွေအတွက် အားရစရာအခြေအနေလို့ ယေဘူယျအားဖြင့် ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြတာမျိုး၊ ခရီးသွားဆောင်းပါးကောင်းတွေကို ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ရေးဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်လာတာကလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်ပိုအလေးထားလာတဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုနှစ်မှာဆိုလည်း Tourism Master Plan အရ ခရီးသည်(၇)သန်းကျော်အထိ ဝင်ရောက်လာစေရေးရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့က လက်ရှိအနေအထားအရ ဖြစ်နိုင်ဖို့အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာ ပြည်ပဧည့်သည့်လာရောက်မှှု ၃၅၅၁၄၂၈ ဦးရေ နဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာ ၄၃၆၄၁၀၁ ဦးအထိလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်နှစ်တာ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာဆိုရင် ခရီးသွား ၈၁၂၆၇၃ ဦးရေ (၂၃ ရာခိုင်နှုန်း) အထိ တိုးတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံထဲထိလာရောက် ခရီးသွားစစ်စစ်(ဗီဇာအစီအစဉ်နဲ့ လာရောက်တဲ့ခရီးသွား)အရေအတွက်အနေနဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၁၃၉၈၀၉၈ ဦးရေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှဆိုရင် ၁၉၃၀၄၂၅ ဦးအထိပဲ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေက ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ၇၄၉၇၁၉ ဦးအထိလာရောက်ပြီး အများဆုံးဖြစ်သလို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာနဲ့ဖြေလျှော့မှှုပေးပြီးနောက်မှာ သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုရလာဒ်က နိုင်ငံအတော်များများကို အထိခိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူမှှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့နယ်က စတင်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေက ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကျော်အထိ လူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။
ဝူဟန်ကနေ ရောဂါ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကစရင် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့ထိ ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ဦးရေ ၂၀၆၂၈ ဖြစ်ပွားခဲ့သလို သေဆုံးသူ ၄၂၇ယောက်ထိ ရှိထားတာကို သိရပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ကုသနိုင်တဲ့သူအရေအတွက်က သေဆုံးသူ အရေအတွက်ထက်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ထိခိုက်မှှုရှိလာတာက တော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပါ။ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ပိတ်ရက်ရှည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာက ဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို အဓိကထိခိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံအလိုက် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုစာရင်းမှာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုနည်းလာနိုင်တဲ့အတွက် ထိခိုက်မှှု တစုံတစ်ရာရှိပါတယ်။
Myanmar Business Today အနေနဲ့ အခုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အခက်အခဲတွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ၊ အနာဂတ်အလားအလာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခရီးသွားကဏ္ဍနှစ်ပေါင်း(၂၄)ကြာလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Myanmar Voyages International Tourism Company ကိုတည်ထောင်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှာ ဥက္ကဌအဖြစ် လေးနှစ်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ လက်ရှိမှာ နာယကတစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်တဲ့ ဦးသက်လွင်တိုးကို သွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Master Plan အစီအစဉ်အရ ထပ်မံဆောင်ရွက်ရမယ့် အခြေအနေ
ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Master Plan(2013-2020)သည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကျောရိုးသဖွယ် တည်ရှိနေပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘေးထွက်၊ ဆိုးကျိုးကိစ္စအရပ်ရပ်ကို ထိန်းကျောင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေ တစ်ရပ်ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်သလို ဒီဥပဒေအပေါ် ဖော်ဆောင်မယ့်နည်းဥပဒေမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးသက်လွင်တိုးက အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
“Master Plan ကိုအမှီပြုပြီးတော့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို Action Plan အနေနဲ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ ငွေရေး ကြေးရေးဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်လိုတယ်။ နည်းပညာအပိုင်းလဲလိုတယ်။ ဒီ Industry State Holder တွေအပြင် Private Sector၊ Community၊ ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ အထဲထဲဝင်ပါနေတဲ့သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းမှုက လိုပါတယ်။ ဒီဟာတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို အခုကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ညီနောင်အသင်း တွေက နောက်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၊ ဆယ်နှစ်စီမံကိန်းလုပ်ဖို့ဆိုတော့ ပြန်ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ပင်မMaster Plan အရ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် ခရီးသွားတိုးမြှင့်ဝင်ရောက်ဖို့ Master Plan ရေးဆွဲမှုဆောင်ရွက်မှုတွေ ဆောင်ရွက်နေသလို ရခိုင်ပြည်နယ်လို နေရာမျိုးကို Tourism Master Plan အနေနဲ့ ထည့်ရေးဆွဲနေတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာမှာလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထွက်ရှိထားတဲ့ ခရီးသွားဥပဒေက လက်ရှိမှာ တစ်နှစ်ကျော်ကာလကို ရောက်ရှိနေပေမဲ့ နည်းဥပဒေအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
“ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ဒါကို ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ဒါကိုအတည်ပြုရမယ်။ အတည်မပြုနိုင်ရင် ဒါကိုတာဝန်ခံ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ Statement တစ်ခုထုတ်ရမယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာ ပြောရမယ်။ အခုကျတော့ Rules၊ Regulation အနေနဲ့ပဲထိန်းပြီးတော့ သွားနေတဲ့အခြေအနေပဲရှိတယ်”လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်။
ဒီနည်းဥပဒေထွက်လာဖို့အတွက် အခုလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉မှာ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ဂျပန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံအပြင် ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကိုဗီဇာဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ကိုရီးယား၊ မကာအို၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်တို့ကိုဗီဇာfree ပေးခဲ့တာတောင် အချိန်သုံးလေးလကြာမှ တဖြေးဖြေးသိလာတယ်။ ခုတစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးမှ ဧည်သည့်လာရောက်မှုကသိသိသာသာတက်လာတာတွေ့ တယ်”လို့ ဦးသက်လွင်တိုးက ဆိုပါတယ်။
ယင်းအတွက် ဗီဇာဖြေလျှော့တာကို စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်အထိ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဒီကိစ္စအပေါ် ကာလရှည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနအချို့ညှိုနှိုင်း အဖြေရှာသင့် ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းညီနောင်အသင်းသားများက လိုလားနေကြသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရတော့ တရုတ်နိုင်ငံကို သွားဖို့နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကလာမယ့်ခရီးသွားအစီအစဉ်တွေ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေ ၊ ဟိုတယ်တွေနဲ့ ခရီးသွားအသင်းအဖွဲ့တွေကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒီလိုပဲ တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်မယ့်ခရီးသွားတွေကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးတာကို လတ်တလောမှာရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အနောက်ဥရောပနိုင်ငံခရီးသွားတွေ ပိုမိုဝင်ရောက်ဖို့ ဖြေလျှော့မှု၊ အားပေးမှုတွေ လိုအပ်နေပြီး ငွေကြေးသုံးစွဲ နိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုအလေးထားတဲ့ ခရီးသွားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ဦးသက်လွင်တိုးက မြင်ပါတယ်။
“Western Countryတွေက Value Touristတွေပေါ့။ သူတို့ကဖြုန်းအားလဲကောင်းတယ်။ ရက်ရှည်နေတယ်။ နောက် Tourismနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Environment Friendly Traveler တွေဖြစ်တယ်”လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အနောက်တိုင်းခရီးသွားဝင်ရောက်မှုစာရင်းမှာဆိုရင် ယခင်နှစ်ထက်၂၀၁၉စာရင်းများအရ စပိန်(၂၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အီတလီ(၁၇)ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျာမနီ(၂)ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြင်သစ်၊ UKနိုင်ငံခရီးသွားများမှာပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်ဝင် ရောက်လျက်ရှိကာ အမေရိကန်ခရီးသွားများမှာ သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ ပုံမှန်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ကစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဇီးရိုးဘတ်ဂျက်ခရီးစဉ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်က ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနည်းပါးတာကြောင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီအချို့က စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အဆိုပါခရီးစဉ်ကို တရုတ်ခရီးသွားများအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြည်တွင်းကဒေသအချို့မှာ ဒေသခံလူထုရဲ့နေထိုင်မှုစရိုက်နဲ့ အခြေအနေအတင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
“Package Tourကျတော့ Guideရဲ့ ထိန်းကွပ်မှုရှိတယ်။ စည်းကမ်းနဲ့သွားရတယ်။ ဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရသွားရတော့ အခွန်တွေလဲပေးရတယ်။ ဒါကျတော့သိပ်အဆိုးကြီးမဖြစ်ပေမဲ့ ဇီးရိုး ဘတ်ဂျက်ကျတော့ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်တွေဖြစ်လာတယ်”လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကြားသိ၊ မြင်သိနေပေမယ့် ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ကိန်းဂဏန်း အရ လျော့နည်းခြင်းမရှိစေဖို့နဲ့ နှစ်နိုင်ငံခရီးချစ်ကြည်ရေးမပျက်ပြားစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မျက်ကွယ်ပြုထားပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ တရားမဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုလည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
သတိထားဆင်ခြင်ရမယ့် Eco Tourism၊ Community Base Tourism နဲ့ Adventure Tourism
ခရီးသွားကဏ္ဍတိုးတက်စေဖို့ ရှိရင်းစွဲခရီးစဉ်တွေအပြင် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အလျောက် ကန့်သတ်နယ်မြေ တွေမှာ Community Base Tourism၊ Eco Tourism နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖော်ဆောင်တဲ့ Adventure Tourismများ လိုအပ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးသက်လွင်တိုးက အခုလိုဆိုပါတယ်။
“ ဒီနေရာမှာမလွဲဖို့တော့လိုမယ်။ Adventureဆိုပြီးတော့ ဆင်တွေစီးမယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဆက်ကပ်လုပ်ပြမယ် ဆိုရင်လွဲသွားပြီ။ အာရှနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ထိုင်းတို့က ဒီဖက်ခြမ်းမှာတော့ ကြိုက်ချင်ရင်ကြိုက်မယ်။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေကျတော့ တချို့ပညာတတ်တဲ့သူတွေ၊ နောက်တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ ဆန့်ကျင့်တဲ့သူတွေကျတော့ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဆို ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ” လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ခရီးသွားကဏ္ဍရဲ့ Product Design အသစ်စတင်မှု
နောက်ပိုင်းပြည်ပခရီးသွားတွေဆွဲဆောင်ရာမှာ အစုအဖွဲ့အလိုက်လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်အတွက် ထူးခြား ဆန်းသစ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ထည့်သွင်းပြီး Incentive Tourism လို့ခေါ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင် လာကြပါတယ်။
“ ငွေကြေးရင်းပြီးတော့ resource တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့မှ ဧည်သည့်တွေကို surpriseဖြစ်အောင် experienceတစ်ခုရသွားအောင် လုပ်ရတယ်။ ဒါမျိုးကို intensive လို့ခေါ်တယ်။ ဒါဟာတွေကလဲ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးသုံးရသလို လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်လဲ အကျိုးအမြတ်အများကြီးရတယ် ” လို့ ဦးသက်လွင်တိုးက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုခရီးစဉ်ပုံစံ စင်ကာပူခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့က နိုင်ငံအပြင်ထိ ထွက်ပြီး Intensiveခရီးစဉ်မျိုးတွေကို လိုက် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ပခရီးသွားတွေ သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မှှု ပတ်သက်လို့ Digital Platform ဖြစ်တဲ့ QR Code ဖတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိနိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းပိုင်းမှာ အဓိကဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ်၊ မန်းလေးလေဆိပ်၊ ပုဂံ တို့မှာ စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
“ဧည်သည့်တွေကို လိုက်လံပြီးတော့ လက်ကမ်းစာရွက်ဝေတာတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေထောင်ဖို့တော့ သိပ်မလို တော့ဘူး။ ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီ။ အားလုံးက mobile ခေတ်ဖြစ်သွားပြီ။ တယ်လီဖုန်းထဲမှာပဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ် လို့ရတယ်။ ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်။ ပုံတွေကြည့်လို့ရတယ်။ information ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ Trend ကိုသွားရမယ်” လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်။
ဒေသအလိုက်ခရီးသွားတိုးတက်ဖို့ရာအတွက် ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားနေရာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ လုံခြုံမှှုရှိပြီး ခရီးသွားနေရာအလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့က အဓိကပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှှုက နှစ်စဉ်တိုးတက်မှှုရှိတာမှန်ပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်လာဖို့ဆိုရင် လာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှှု ရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာရေရှည်တည်တံနိုင်မယ့်သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Next articleMexico’s Last Countercultural Coast